Shir Muhiim ah oo Bengaladesh uga furmay Wasiiradda Arr.Dibadda Ururka Iskaashiga Islaamka – Radio Daljir
Shir Muhiim ah oo Bengaladesh uga furmay Wasiiradda Arr.Dibadda Ururka Iskaashiga Islaamka
Maajo 5, 2018 5:27 b 1
Magaalada Dhaka ee Caasimadda Dalka Benegaladesh waxaa maanta oo sabti ah ka furmaya Shirka Wasiirrada arrimaha dibadda Waddamada ku jira Ururka Iskaashiga Islaamka ee OIC.
Shirka Wasiir arrimadibadeedyada ee 45aad ayaa looga hadli doonaa nolosha Dadka Muslmiinta ah ee lagu dhibaateeyo Dalka Burma iyada oo Bengaladesh ay tahay dalka dadkaasi qaabilay.
Waxaa kale oo diiradda lagu saarayaa horumarinta Qiyamka,sinnaanta,deggenaanshaha iyo Nabadda Waddamada Islamka.
Marka Shirkan uu dhamaado ayaa la filayaa in maalinta Axadda ee Berri laga soo saaro war murtiyeed ku saabsan sida gargaar bani’damnimo lagu gaarsiin karo Muslimiinta Rohingya ee laga soo qixiyay dalkooda.
Shirkii 44aad ee kan ka horreeyay waxaa looga hadlay sanadkii hore xaaladaha Waddamada Soomaaliya,Nigeria, Lake Chad Basin iyo Dalka Jamhuuriyadda Afrikada dhexe.
Ra’iisul wasaarha Soomaaliya oo soo xiray Shirkii ganacsiga ee ka socday Turkiga
OO MA SHAQEEYAA URURADAN?.
WAA 2 BILYAN MUSLIMKU HADANA WAA DAAD XOORTA OOKALE.
CAR BAL DONALD TRUMP & QUDUS WAX HA KA DHAHAAN